Dowladda Puntland oo Dhakhaatiir u Dirtay Goobaha ka baxsan laamiga – Radio Daljir
Dowladda Puntland oo Dhakhaatiir u Dirtay Goobaha ka baxsan laamiga
Diseembar 12, 2015 3:59 b 0
Somalia, December 12, 2015-(Daljir)_Wasaradda Caafimaadka dowlada Puntland ayaa maanta kooxo caafimaad u dirtay afar gobol oo ka mid ah kuwa Puntland, kuwaasoo kasoo fulin doono dhammaan addeegyada caafimaadka.
Munaasibadda kooxahan lagu sagootinayay oo lagu qabtay xarunta wasaradda ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaradda Caafimaadka Dr.Cabdirisaaq Xirsi Xasan wuxuna sheegay tiimamkan inay kala aadi doonaan deegaano hoos yimaada Gobaladda Sool, Cayn, Haylaan iyo Nugaal.
Kooxahan caafimaad ayuu sheegay inay mudo todobaad ah meelaha ay tagi doonaan ka fulin doonaan addeegyo caafimaad koox kastana waxaa hoggaaminaya sida uu agaasimuhu sheegay labo dhakhtar, waxayna iskugu jiraan shaqalaha wasaradda caafimaad,dhakhaatiir iyo kal-kaaliyaal.
Dr.Cabdirisaaq Xirsi Xasan ayaa sheegay barnaamijkan inuu yahay noociisa kii lixaad oo la qabto isla markasna uu faa’iidooyin badan keenay, wuxuna u mahad celiyay Hay’adda UNFPA oo barnaamijkan kala shaqaysan, daawooyin kala duwan ayay kooxahan caafimaad horay usii qaateen kuwaasoo loogu talo galay in howlgalkooda ku fuliyaan ee caafimaad.
Wuxuu kula dardaarmay agaasimaha inay si wanaagsan addeegyada caafimaadka u gaarsiiyaan meelihii loogu talo galay, isagoona sheegay barnaamijkan oo kale isagoo tijaabo ah in laga hir galiyay gobalka Sool.
Wasaradda Caafimaadka ayaa horay barnaamijyo caafimaad ka hirgalisey deegaanada laamiga ka fog, deegaano ka tirsan gobalka Gardufuu ayaa laga hir galinayaa xarumo caafimaad oo labo ka mid ah ay noqon doonaan Isbitaalo.
Shir looga Hadlayo Hiigsiga 2016-ka oo ka Furmay Jabuuti